Ungayiguqula kanjani i-TV ibe yiziko (ividiyo nohlelo) 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Akukho lutho olufana nenduduzo ethokomele yomlilo odumayo, kepha hhayi wonke umuntu angakujabulela kalula. Ikakhulukazi emadolobheni, iziko elisendlini alivamile, futhi nalabo abanalo kungenzeka bangabi naso isikhathi noma ithuba lokulungisa izinkuni zokubasa. Kunoma ikuphi, kungenzeka lingisa ubukhona bendawo yomlilo endlini futhi wakhe indawo "ebonakalayo" yomlilo ephelela hhayi ekuphumuleni ebusuku kuphela, kepha nasesikhathini sedina nabangane noma nomndeni, njengoba ubungenza ngoKhisimusi noma obunye ubusuku basebusika.
Ngiyakwazi shintsha i-TV yakho ibe yiziko elibonakalayo, mahhala, ngezindlela eziningana ezilula futhi eziphumelelayo, eziholela ku- Bona umlilo oqhephukayo ngokuchazwa okuphezulu, uqedile nge imisindo yezinkuni ezivuthayo.
FUNDA NONKE: Izithombe ezinhle kakhulu zasebusika ze-PC ezineqhwa neqhwa
Ngihamba ngeNetflix yakho
Indlela yokuqala yokuguqula i-TV yakho ibe yiziko futhi okulula kunazo zonke ukudlala ividiyo yeziko esivuthayo. Lokhu kungenziwa kusuka ku-YouTube noma, okungcono, kusuka kuNetflix. Kubukeka ngokumangazayo Camino O Ikhaya ku-Netflix, ungathola amavidiyo asebenze kahle ngehora.
Ngokuqondile, ungaqala amavidiyo alandelayo ku-Netflix:
Iziko lekhaya lakho
Iziko lomlilo elijwayelekile lasekhaya
Indawo yomlilo yaseCrackling House (Birch)
Ngihamba nge-Youtube yakho
Ku-YouTube ungathola konke futhi akukho ukushoda kwamavidiyo amade ukubona iziko elishisayo nelibhodlayo ku-TV. Isiteshi "Indawo yomlilo yekhaya lakho" sinezinguqulo ezimfushane zamavidiyo we-Netflix, ngenkathi ufuna iCamino noma i- "Fireplace" ku-YouTube ungathola amavidiyo angamahora ayisishiyagalombili noma ngaphezulu aqhubekayo ongaqala ngqo ukusuka lapha:
Indawo yangempela yomlilo engu-4K amahora amathathu
Iziko amahora angu-10
Indawo yomlilo kaKhisimusi 6 amaminerali
Indawo yomlilo kaKhisimusi 8 ore
FUNDA NONKE: Ungawabuka kanjani amavidiyo we-YouTube ku-TV yakho yasekhaya
Isicelo ukubuka eziko on Smart TV
Ngokuya ngohlobo lwe-Smart TV oyisebenzisayo, ungafaka uhlelo lokusebenza lwamahhala ngokusesha igama elithi Fireplace ku-App Store yalo. Phakathi kokuhle engikuthole, singasho:
Uhlelo lokusebenza lomlilo lwe-iPad noma i-Apple TV
Indawo yomlilo yasebusika
Iziko lokuqala lomlilo
Indawo yomlilo enhle
Isicelo se-Android TV / i-Google TV Fireplace
IBlaze - Indawo yokubasa umlilo eyi-4K
Iziko lomlilo le-HD
Izindawo zomlilo zothando
Uhlelo lokusebenza lwe-Amazon Fire TV Fireplace
Iziko elibonakalayo le-HD IAP
Uhlelo lokusebenza lwe-Chromecast fireplace
Amadivayisi we-Chromecast (okungewona i-Google TV), awanazo izinhlelo zokusebenza zokubuka indawo yomlilo, futhi inketho yokubeka isilondolozi sesikrini somlilo nayo yanyamalala (yayitholakala ku-Google Music). Kodwa-ke, ungasesha eSitolo ngezinhlelo zokusebenza ezingasakaza ividiyo yomlilo ovuthayo ku-Chromecast ye-smartphone ye-Android (njengeFireplace yeChromecast TV) noma i-iPhone (njengeFireplace yeChromecast). Ungasakaza futhi noma iyiphi ividiyo ye-Youtube usebenzisa i-smartphone noma ikhompyutha yakho ku-Chromecast.